Nduzi nkuzi nke Python maka ndị mbụ - IT School Tech
Nduzi Ọzụzụ Python maka Ndị Amalite
Nduzi nkuzi Python:Python bụ ebe dị iche iche n'etiti asụsụ ndị a maara nke ọma na mbara ụwa na ọtụtụ ndị na-eche echiche ịmụta asụsụ na-eburu n'uche na ihe mgbaru ọsọ na-akwado nkwado ha nwere ohere ọrụ na otu ụlọ ọrụ IT dị ịrịba ama. Asụsụ mmemme ahụ na-arịgo ebe niile na n'ihi ọnọdụ ya na-emeghe na-egosi na o nwere akụkụ ka ukwuu maka igwu egwu mmepe, ndị na-arụ ọrụ azụ, XML ịmepụta, mwepụta mwepụ na ọbụna ngwaọrụ nhazi ndị ọzọ. Ihe mgbakwunye na ebumnuche nke asụsụ mmemme a bụ na ọ bụ otu n'ime ihe kachasị mfe ịmụta ma nyere aka na ọtụtụ ihe omume.
Atụmatụ maka Ọzụzụ Eke Ọgba
Choro nke ọma
Jiri Ntughari Ọfụma Mee Ihe
Gbalịa ka ị ghara ịla azụ ịrịọ enyemaka
Ọzụzụ ọzụzụ ma ọ bụ ogige ọzụzụ
Tinye ihe ndi ozo n'ime ihe ndi ozo
E nwere ụzọ abụọ dị iche iche nke Eke Ọgba (2 na 3) na ị ga-ahọrọ nke ga-abara gị uru kacha dabere na ikike ị chọrọ iji nweta ọrụ gị ma ọ bụ ubi nke ịmara. Abụọ ahụ dị iche iche na-elekwasị anya nke ọma ma jiri egwu na-elekwasị anya na ọnọdụ mmemme ahụ ma ị nwere ike ime nyocha nke onwe gị banyere mmadụ abụọ ịhọrọ onye ị ga-atụgharị anya na oge ụfọdụ.
Onye ntụgharị okwu nwere ike ịgba ọsọ gị koodu ma nye gị ntụziaka banyere otu ihe ahụ; iji hụ otú koodu ga-aga n'ihu nakwa ihe ha yiri ka ọ ga-egbu. Na mmalite nke Ọzụzụ Eke Ọgba, nke a nwere ike inyere gị aka. Onye ntụgharị okwu na-enye mkpesa nke na-aga n'ihu n'oge na-adịbeghị anya inye gị isi ịmalite ịmalite ịkụziri Eke Ọgba.
Ịmụ asụsụ ọzọ ịmepụta ihe anaghị adị mfe ma a ga-enwe oge mgbe ị ga-agbapụta na koodu ole na ole. Ị nwere ike ịchọ enyemaka nnabata na ụdị nke Eke Ọgba obodo na weebụsaịtị ma jiri ike ha na-emeri ihe dị ịrịba ama nke Egwuregwu Egwu gị.
Ọ bụrụ na ị bụ n'ezie n'eziokwu banyere ịmụ asụsụ mmemme mgbe ahụ ị ga - ekwesịrị ịghara ịchọrọ ịmalite ọzụzụ ma ọ bụ ịme mkpebi n'usoro ọmụmụ ihe siri ike. Enweghi uzo ozo di iche iche mgbe i na acho onodu ogugu n'adighi ike na ulo oru ndi ozo di elu nwere ike ime ka i nwekwuo uru na ihe di oke egwu na okwu mmemme n'ezi ezi. Mee nyocha n'onwe gị ma mee usoro ma ọ bụ nkwenye ma ọ bụ ụdị ọzụzụ ọ bụla iji mee ka usoro mmemme gị na-elekọta ndị ọkachamara iji mee ka ị pụọ mgbe niile.
Mgbe ị na-amụ ihe ma ọ bụ na ị na-enweta akara na mkpụrụ na asụsụ nke asụsụ ahụ, ị ​​nwere ike itinye ohere gị na ọrụ dị iche iche na-emepe emepe, dịka ndị a agaghị enyere gị aka ịchọta ma ghọta ndị koodu ndị ọzọ, ma ọ ga-enye gị ohere zuru ezu iji nye aka ma welie ikike ị nwere ike ịmepụta ya dị ka ọ dị. Enweghị ezigbo ihe mere ị ga-eji nwee nkụda mmụọ banyere ikike ịmekọrịta gị dị ka inye ha onyinye mgbe niile ga-eme ka ha dịkwuo mkpa ka ha gwụchaa.